SXSW 2014 Iskuduwaha Macluumaadka Isdhexgalka | Martech Zone
SXSW 2014 Iskuduwaha Is-dhexgalka Macluumaadka
Talaado, Maarso 18, 2014 Khamiis, Juun 18, 2015 Jenn Lisak Golding
Mid ka mid ah waxyaabaha qabow ee ku saabsan lamaanaheena Meltwater's barnaamijka la socodka warbaahinta bulshada ayaa ah inaad si buuxda ula socon karto mowduucyada iyo dhacdooyinka si aad sawir buuxa uga hesho dareenka iyo caannimada. Sannadkan, way bilaabeen la socodka guuxa ku xeeran SXSW Febraayo 26 oo laga helay isbeddello xiiso leh oo qurux badan:
Xog-hayaha NSA, Edward Snowden, wuxuu ahaa heshiis weyn. 7% dhammaan guuxa bulshada ayaa la xiriiray Snowden.
Ragga wax badan ayey ku dhajiyeen bulshada: 62% oo ka soo horjeedda 38% haweenka.
Justin Bieber wuxuu kahelay 400% in kabadan bisadaha Grumpy! (Dheh whaaaa?)
Dhamaan tirooyinka qabow, ka fiiri faahfaahinta hoose. Ha iloobin inaad iska hubiso kafaala-qaadeheena 'Meltwater's' qalabka kormeerka warbaahinta bulshada ee shirkadaha.
Abuuritaanka Websaydh Soo Galaya Sannadka 2014
Mar 18, 2014 at 11: 55 AM
Ma ahan wax badan oo ku saabsan muusikada cusub ama farsamada cusub. Ma arko meel lagu xusay dhacdo murugo leh (3 qof ayaa ku dhintay) SXSW 2014. Aad u sheegid.
Mar 18, 2014 at 3: 11 PM
Haye John - Su'aalo wanaagsan. Waxaan soo saaray macluumaadkan, markaa waan ka jawaabi doonaa: waxaan kormeer ku sameynay qaybta is dhexgalka ah ee shirka gaar ahaan, kaasoo soconayay laga bilaabo Maarso 7-11. Marka, ma xusin shilkii foosha xumaa ee dhacay 12-kii Maarso. Waxaan ku raacsanahay inay xiiso leedahay inaysan jirin wax badan oo ku saabsan teknolojiyadda cusub inta lagu jiro xilligan. Iyo, sidii qof ku sugnaa Red River 2 maalmood kahor musiibadaas foosha xun, qalbigaygu wuxuu laqeeyaa qof walba oo ay saameysay.